Isku aadka Horyaalka Ingiriiska oo dhamaystiran (Chelsea oo bilowgiiba baxar ku jirta) | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Isku aadka Horyaalka Ingiriiska oo dhamaystiran (Chelsea oo bilowgiiba baxar ku jirta)
Isku aadka Horyaalka Ingiriiska oo dhamaystiran (Chelsea oo bilowgiiba baxar ku jirta)
(London) 16 Juun 2021 – Waxaa lasoo bandhigay isku aadka EPL iyadoo ay Tottenham marti gelinayso Man City, halka Thomas Tuchel uu wajahayo Chelsea, oo 3 ka tirsan kooxaha waawayn wajahaysa 5-ta kulan ee ugu horreeya.
Horyaalka oo bilaabmaya 14-ka Agoosto, City waxay u safraysaa woqooyiga London iyadoo ay deriskeeda Manchester United ay madadaalinayso Leeds, Liverpool ayaa u safraysa kooxda dhowaan soo dallacday ee Norwich iyo Chelsea marti gelinayso derby London oo ay ku wajahayso Crystal Palace.
Yeelkeede, dhibka Tuchel ma aha kulanka 1-aad e waa booqashooyinka xiga oo ay ku kala dhacayso Arsenal, Liverpool iyo Tottenham, kahor inta aanay marti gelin City.
Manchester United, ayay se u yara sahlan tahay, oo waxay la ciyaaraysaa Leeds, Southampton, Wolves, Newcastle, West Ham, Aston Villa iyo Everton kahor biririfta qaramada.
Halkan ka eeg isku aadka oo dhan….
Previous article”Shusha waxay u noqotay dadkii lahaa!” – Turkiga & Azerbaijan oo heshiis taariikhi ah ku galay magaalo muhim ah oo laga xoreeyey Armenia
Next articleHadal ay horay u sheegtay DF Somalia oo beenoobey & xaalad murugo leh oo ka jirta xeebaha dalka